Luka Modric Oo Caddeeyey In Aanu Sida Cristiano Ronaldo Uguma Waalan doono Abaal-marinta Xiddiga Adduunka | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Luka Modric Oo Caddeeyey In Aanu Sida Cristiano Ronaldo Uguma Waalan doono Abaal-marinta Xiddiga Adduunka
(13-9-2018) Halyeyga khadka dhexe ee xulka qaranka Croatia iyo kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa soo bandhigay sida uu shakhsiyan uga duwan yahay Cristiano Ronaldo, kaddib markii uu kusoo baxay liiska tartameyaasha saddexda ah ee abaalmarinta ciyaartoyga ugu wanaagsan sannadkan.
Modric ayaa waxa uu sheegay in aanu dan ka lahayn, diiraddiisuna saarnayn abaal-marinta shakhsiga ah ee THE BEST, hase yeeshee, uu ka jecel yahay inuu awoodda saaro ciyaarta garoonka gudihiisa iyo inay asxaabtiisa si wada jir ah ugu wada guuleystaan koobab.
33 jirkan ayaa Cristiano Ronaldo ku garaacay abaal-marinta ciyaartoyga ugu wanaagsan qaaradda Yurub, waxaanay taasi keentay in Cristiano aanu ka qayb-gelin xafladdii lagu guddoonsiinayey abaal-marinta.
Modric oo warbaahinta siiyey hadal u muuqday inuu ugu duur-xulayey Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu sheegay in haddii la siiyo abaal-marin shakhsi ah aanay waxba iska beddeli doonin ee uu sidiisii hore uun ahaan doono, taas beddelkeedana uu ka jecel yahay kooxda oo guuleysata.
“Kubadda cagta, mar walba waxa ugu muhiimsan waa kooxda. Macne iima samaynayso haddii aan ku guuleysto abaal-marin shakhsi iyo in kale, sababtoo ah, ka sokow waxa laga helayo, waxba igama beddelayso.” Sidaas ayuu yidhi Modric.
Dhinaca kale, waxa uu Modric tibaaxay in Real Madrid ay u baahan tahay inay u shaqayso qaab koox ahaan isku duuban ah, waxaanu yidhi: “Waxaynu joojinay u ciyaaristii koox ahaaneed, waxaanaynu isku beddelnay kali ciyaareyaal, taasina maaha natiijo wanaagsan, waxa khasab ah inaynu taas cashar ka barano oo dib usoo kabano.”